(DHAGEYSO) Madaxweyne Gaas oo xarun cusub dhagax dhigay – Radio Daljir
Maarso 28, 2016 4:40 b 0
Madaxeynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 28-March-2016 waxaa uu Garoowe ka dhagax dhigay dhismaha cusub ee ICT, kaas oo lagu soo kordhin doono Wasaaradda Warfaafinta dawladda Puntland.
Dhagax dhigaas dhismaha ICT uu maanta dhagax dhigay Madaxweynaha Dawlada Puntland ayaa waxaa ku weheliyey Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashid Sharmaarke oo mudo afar maalmood ah ku sugan magaalada Garoowe ee Caasimada Dawlada Puntland.
Sidoo kale munaasabadda Dhagax dhigga ayaa waxaa goob joog ka ahaa xubo ka tirsan golahayaasha wasiirada ee dawladda Puntland iyo Dawladda Federaalka Soomaaliya, Waxaana Munaasabadda Dhaga-dhigga hadallo faahfaahin ka jeediyey Wasiirka Warfaafinta Dawladda Puntland iyo Wasiirka Boostada iyo isgaadhsiinta Dawladda Federaalka Soomaaliya.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in nidaamkani uu wax badan kusoo kordhin doono nidaamka isdhaafsiga xogaha ee wasaaradaha kala duwan ee dawladda Puntland iyo guud ahaan isgaadhsiinta Puntland.
DHAGEYSO: Guddiga Gurmadka Abaaraha ee Puntland oo biyo dhaamin sameeyey